ပင်မစာမျက်နှာ » ပညာရေး Apps ကပ » အင်္ဂလိပ် Chinese အဘိဓါန်
အင်္ဂလိပ် Chinese အဘိဓါန် APK ကို
အကောင်းဆုံးအင်္ဂလိပ် Chinese အဘိဓါန် app ကိုဆယ်လူလာမျှော်စင်အကွာအဝေးထဲကဒါမှမဟုတ်သင်ဘက်ထရီကိုကယ်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်, ပြည်ပမှာခရီးသွားလာ, ထိုကဲ့သို့သောသင်တစ်ဦးလေယာဉ်ပေါ်မှာဆိုရင်သကဲ့သို့, သင်တစ်ဦးကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲအဘိဓါနျ browse ခွင့်ပြု!
အကောင်းဆုံးအင်္ဂလိပ် Chinese အဘိဓါန် app ကို Android မှာဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်အပေါ်ယခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 350,000 စကားလုံးများနှင့်, example sentences, အသံအသံထွက်, အမြန်ဆုံးရှာဖွေရေးအမြန်နှုန်း, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှာဖွေရေးနည်းစနစ်များနှင့်ထို့ထက် ပို. နှင့်အတူ (ရိုးရာနှင့်မျက်မှောက်ရေးရာနှင့်တရုတ်နှစ်ဦးစလုံး) ကိုခေတ်ပြိုင်အင်္ဂလိပ် / တရုတျဘာသာစကား, ၏စာပိုဒ်တိုများကျော်ဖုံးလွှမ်း ...
★: ကျော် 300K တရုတ်စကားများ & စာပိုဒ်တိုများ
★: Flexible ရှာဖွေရေးနှင့်အမြန်ဆုံးရှာဖွေရေးမြန်နှုန်း
★: ရှာရန်သမိုင်း, Star စကားတရားစကားတော်စာရင်း
★: Support SD ကဒ်ရွှေ့ရန်
★: ရီးရဲလ်လူ့စကားသံကိုအသံထွက်, တရုတ်, အင်္ဂလိပ်
1: ပိုပြီးအော့ဖ်လိုင်းစကားလုံးများနှင့်စာကြောင်း Add
2: နယူး UI ကိုဒီဇိုင်း
3: Known ချို့ယွင်းမှုများ Fix
4: တရုတ်များအတွက်ဒေသခံအင်ဂျင်ပံ့ပိုး, သင်ကွန်ရက်အင်ဂျင်ရှေးခယျြနိုငျ
1: NEW UI ကို
5: လူသိများ bug တွေ Fix
အင်္ဂလိပ် Chinese အဘိဓါန်
37.79 ကို MB